नियमित यौ Yyनसम्पर्क राख्ने व्यक्ति कमजोर हुन्छ कि झन् बलियो ? यस्तो छ निष्कर्ष – Online Khabar 24
नियमित यौ Yyनसम्पर्क राख्ने व्यक्ति कमजोर हुन्छ कि झन् बलियो ? यस्तो छ निष्कर्ष
मानिसहरु यौ’न स’म्पर्क केवल आनन्द लिन र सन्तान उत्पादनका लागि मात्र गरिने ठान्छन् । तर नियमित यौ’ न स म्प’र्क गर्दा विभिन्न रो’गबाट मुक्ति वा फाइदा हुने बिभिन्न अध्यनले देखाएको छ ।
नियमित से’ क्स गर्दा यस्ता फाइदा हुन्छ । हेर्नुस यो भिडियो,
टाउको दु’ख्नेः नेशनल सर्वे अफ से’ क्सु अ ल एटीट्युड्स एण्ड लाइफस्टाइलले गरेको सोधले मा’इग्रेन भन्ने टाउको दुख्ने रोगका विरामीलाई नियमित से’ क्स फाइदाजनक हुने देखाएको छ । सोधले महिनामा ५ पटक भन्दा कम से’ क्स गर्नेहरुलाई मा इग्रेन हुने नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।
ब्ल’ड प्रे’शरः उच्च रक्तचा’पका विरा’मीलाई पनि नियमित से’क्स फाइ’दाजनक रहेको अध्ययनले देखाएको छ । नियमित से’ क्स गर्दा उच्च र’क्तचा’प निय’न्त्रण हुने शोधको दावी छ ।
प्रो’स्टेट क्या’न्सरः नियमित से’ क्स गर्ने पुरुषलाई प्रो’स्टेट क्या’न्स र को ख’तरा निक्कै कम हुने । महिनामा २१ पटक वा नियमित से’ क्स गर्दा प्रोस्टेट क्या ’न्स र को खासै खत’रा नहुने दावी शोध’कर्ताहरुले गरेका छन्
मो’टोपन मो’टोपनबाट समस्यामा परेकाहरुलाई पनि नियमित से’ क्स राम्रो मानिएको छ । कुनै पनि कसरत गर्नु भन्दा नियमित से’ क्स मोटो’पन घ’टाउन सहजसिद्ध हुने भनाइ छ ।
हृदय’घा त बाट कम ख त राः नियमित से ’क्स गर्दा हृद य’घा तको ख त रा पनि कम हुने अध्ययनले देखाएको छ । नियमित से’ क्स गर्दा शरीरमा ए’स्ट्रोजन र टेस्टो’स्टे’रोनका संतुलन बनि राख्ने हुँदा हृद’यघा तको कम हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।
संसारको जुनसुकै भू-भागमा पनि पाईने यो वनस्पति हिन्दूहरूको लागि अत्यन्तै पुजनिय एवम उपयोगि वनस्पति हो । चिकित्सकहरूका अनुसार तुलसीमा सयौ रो’ग निको गर्ने क्षमता छ । यसमा पात, हाँगा, फूल, जरा, बीउ सबै उत्तिकै महत्व का छन्
२) धेरै दि-शा लागेमा ८-१० वटा तुलसीपात चौथाइ भाग जाईफल पिनेर खाएमा ठिक हुन्छ । ३) तुलसीका पातको प्रयोग रुघाखोकी, पेट दु-खाइ, आँखाका समस्या, मधुमेह, कोलेस्ट्रोल, मा-इग्रेन, अव-साद लगायतका अनेकौं रोग निको पार्नका लागि गरिने देखाएका छन् । ४) आ-उँ, शु-ल परेमा १०–१२ तुलसीको पात मिश्रीसंग पिनेर खाने गरेमा ठिक हुन्छ र आवश्यकता परेमा एक हप्तासम्म खानु होला । यो खबर जागरण नेपालमा छ ।
Prevटिकटकमा भाईरल जोडी सुरज-सिमा पहिलो पटक मिडियामा । लोभलाग्दो प्रेमदेखि झगडा, हसाएरै मुर्छा पारे (भिडियो हेर्नुस)
nextशरीरका यी ६ ठाउँको रौँ कहिल्यै पनि नहटाउनुस् !